Ahoana ny fomba hanakanana ny alika tsy hanaikitra anao? | Tontolo alika
Koa satria alika kely io dia ampiasain'ny alika amin'ny zavatra maro ny vavany, toy ny fitsakoana ny sakafony na ny fizahana ny tontolo iainany. Misaotra an'io fa afaka fantany izay zavatra raisiny, ohatra, fa raha avelantsika hanaikitra antsika izy rehefa olon-dehibe dia handratra antsika izany.
Mba hialana amin'izany dia tena ilaina ny mampianatra azy hatramin'ny fahazazany fa tsy afaka manaikitra izy. Azavaiko aminao eto ambany ny fomba hanakanana alika tsy hanaikitra anao.
Tsy misy olona mieritreritra hoe manaikitra olona ny alikany, fa ny tena izy dia Raha tsy nahazo fanabeazana sahaza izany biby izany na nianjera tany am-pelatanana izy dia afaka nanao izany raha nila izany. Isika, amin'ny maha mpikarakara azy, dia tsy maintsy miantoka, tsy hoe faly miaraka amintsika fotsiny izy, fa manaja antsika koa. Nefa mitandrema, tsy ny fametrahana ny tenantsika aminy, fa ny fampianarana azy, amin'ny fomba fanaon'ny ray aman-dreny ny zanany, fa misy zavatra tsy azony atao.
Mba hanaovana izany dia tena ilaina ny manao ireto manaraka ireto:
Avelao ny alika hiara-miaina aminay, ao an-trano: amin'izay ianao dia ho tony kokoa sy ho sambatra kokoa.
Alefaso izy: alohan'ny hafanana voalohany (misy 6 volana eo ho eo).
Araraoty amin'ny laoniny araka ny tokony ho izy: ny alika dia tsy maintsy mifandray amin'ny karazan'olona (vehivavy, lehilahy, ankizy, zazakely, olon-dehibe, antitra) ary amin'ny alika hafa, indrindra ny 2 ka hatramin'ny 3 volana.
Milalaova zavatra betsaka aminy: miaraka amin'ny kilalao, na baolina io na biby tototry. Raha manandrana manaikitra antsika izy dia hajanontsika ny lalao.
Aza avela irery irery miaraka amin'ny zaza izy: Na ny iray manimba ny iray hafa.
Mampianatra ny ankizy hiaraka amin'ilay alika: Tokony ho fantatry ny ankizy fa tsy afaka misintona ny rambony na ny sofiny izy ireo, na mampifikitra ny rantsan-tànany amin'ny masony na mianika eo amboniny.
Ka alao antoka fa ho tsara fitondran-tena ny volontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hanakanana ny alika tsy hanaikitra anao?
Maninona no afaka mamonjy ny ainao ny fananana alika?